အရွယ်ရောက်ပြီးသူပညာရေး - ဘယ်လိုပြန်ကျောင်းကိုသွားကြဖို့ | USAHello | USAHello
သင်သည်သင်၏ပညာရေးပြီးအောင်ချင်ပါနဲ့? အသစ်တစ်ခုကိုအလုပ်အဘို့အလေ့ကျင့်သို့မဟုတ်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေ? တက္ကသိုလ်သို့သွားရန်သို့မဟုတ် English လေ့လာသင်ယူ? သင်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်သင့်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကပညာရေးရနိုင်ပုံကိုထွက်ရှာမည်.
အရွယ်ရောက်ပြီးသူပညာရေးအတွက်သည်အခြားအမည်များဖြစ်ကြသည် ဆက်လက်ပညာရေး, အဆင့်မြင့်ပညာရေး, နှင့် ရာသက်ပန်သင်ယူမှု. ဤဝေါဟာရများကိုအားလုံးအရွယ်ရောက်ငျယူနိုငျသနညျးလမျးအကြောင်းကိုများမှာ. အရွယ်ရောက်ပြီးသူပညာရေးအမျိုးမျိုးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ.
အခြေခံပညာအရွယ်ရောက်ပညာရေး - စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်း
တောင်မှလူကြီးအဖြစ်, သင်လုပ်နိုင်သည် ဖတ်ပါနှင့်ရေးသားဖို့သင်ယူ. တစ်ဦးလူတန်းစားတစ်ခုသို့မဟုတ်နည်းပြဆရာနှင့်အတူသင်ယူဖို့ပိုမိုလွယ်ကူသည် (One-to-တဦးတည်းဆရာများ). အရွယ်ရောက်စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်းသင်ခန်းစာများအဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်နေရာအများအပြားရှိပါတယ်. အတော်များများကအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်များနှင့် စာကြည့်တိုက် စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်းသင်ပေးကြောင်းအရွယ်ရောက်ပညာရေးစင်တာများရှိ.
အတော်များများကလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်တစ်ရက်သို့မဟုတ်ညဦးယံ၌အင်္ဂလိပ်အတန်းရှိ. သငျသညျစာကြည့်တိုက်မှာသူတို့ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်, အသိုင်းအဝိုင်းစင်တာများ, နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပညာရေးစင်တာများမှာကောလိပ်များအတွက်. သင်လုပ်နိုင်သည် တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ကိုရှာဖွေ သငျသညျအနီး. သင်တစ်ဦးလူတန်းစားရဘို့ခဲယဉ်းသည်ဆိုပါက, အင်္ဂလိပ်အွန်လိုင်းသင်ယူမှုကိုစတင်ရန်. သငျသညျကိုသင်ယူကူညီရန်အများအပြားအခမဲ့သင်တန်းတွေရှိပါတယ်.
USA တွင်, အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ဦး GED ရနိုင်®, အထက်တန်းကျောင်းပညာရေးအစားထိုးရန် HiSET သို့မဟုတ် TASC ဒီပလိုမာ. သင်ကစမ်းသပ်မှုများအတွက်လေ့လာရပါလိမ့်မယ်, သို့သော်အထက်တန်းကျောင်းထက်အများကြီးမြန်ဖြစ်ပါသည်. တစ်ရက်သို့မဟုတ်ညဦးယံအချိန်အတန်းသင့်ဒေသခံကောလိပ်သို့မဟုတ်စာကြည့်တိုက်မှာရှိပါတယ်. သို့မဟုတ်သင်တို့သည်ငါတို့၏ယူနိုင်ပါသည် အခမဲ့အွန်လိုင်း GED® ပြင်ဆင်မှုအတန်းအစား ဘာသာစကားမြားစှာ.
သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာတဲ့အခါမှာ, သငျသညျအခြေခံအလုပ်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်နိုင်ပါသည်. သငျသညျကှနျပြူတာကိုအသုံးဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်. ဒါမှမဟုတ်သင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အလုပ်အကိုင်အဘို့အလေ့ကျင့်ချင်, ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုအဖြစ်. သငျသညျအလုပ်စင်တာများမှာအလုပ်သင်တန်းအမျိုးမျိုးကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီများ, အသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်များ, နှင့်ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများ. ဘယ်လိုသင်ယူ ရှာတွေ့ အလုပ်အကိုင်အလေ့ကျင့်ရေး progams နှင့်အလုပ်ကျွမ်းကျင်မှု get.
အမျိုးမျိုးကို USA ကမ်းလှမ်းမှုကိုနှစ်နှစ်သင်တန်းများအတွက်ရပ်ရွာကောလိပ်များ. သူတို့ထဲကအတော်များများဟာသင်တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်. တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ကိုရှာပါ သငျသညျအနီး.
တက္ကသိုလ်များလေးနှစ်သို့မဟုတ်ကြာကြာသင်တန်းများပူဇော်. သငျသညျတက္ကသိုလ်ကနေဘွဲ့ရခဲ့လျှင်, သင်တစ်ဦးဒီဂရီလိုအပ်ကြောင်းအလုပ်အကိုင်များများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. ဘယ်လိုထွက်ရှာမည် ကောလိပ်ကျောင်းလျှောက်ထား.
သင်တို့သည်လည်းအွန်လိုင်းအဆင့်မြင့်ပညာရေးအတန်းယူနိုင်ပါသည်. Coursera ၏အွန်လိုင်းသင်တန်းများနှင့်ဒီဂရီကိုရှာပါ.